Dowladda Soomaaliya oo sheegtay Inuu socdo Qorshe lagu soo saarayo lacago cusub – Radio Daljir
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay Inuu socdo Qorshe lagu soo saarayo lacago cusub
Diseembar 31, 2021 11:50 b 0
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa ka warbixiyay hannaanka lacag bixinta mideysan ee ay wadaagaan bangiyada dalka.
Guddoomiyuhu waxa sheegay in lagu guuleystay hannaanka isku xiran ee bangiyada, sidaa daraadeedna ay waajib tahay in dadka lala wadaago, iyadoo la xafidayo ayuu yiri hantida shacabka ee taallaa 13 bangi gaar ah oo xiriir wanaagsan la leh Bangiga Dhexe.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa xusay in waajibaadkooda qaran uu yahay hubinta adeegyada ay bixiyaan bangiyada gaarka ah iyo sida ay ugu dhaqmaan shuruucda lagama maarmaanka ah ee u degsan maamulada guud ahaan bangiyada.
Guddoomiyaha, mar uu ka hadlaayey soo saaridda lacago cusub oo shillin soomaali ah waxa uu qiray in ay socdaan diyaargarow ku aadan howshaasi, isla markaana waxaa uu rajeeyay in waqtiyada soosocda lagu guuleysto soo saaridda lacago cusub.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Cabdiraxmaan Cabdilaahi ayaa waxa uu rajeeyay in sanadka soo socda la helo Koboc dhaqaale oo aad u wanaagsan ,inkastoo ayuu yiri Cudurka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay ganacsigii caalamka iyo isu socodkii dadka.
MAANHADAL: KHILAAFKA FARMAAJO IYO ROOBLE & SHIRKA GOLAHA WADATASHIGA EE ROOBLE UU GUDDOOMINAYO (daawo)
Warka Maanta ee maalinka JIMCAHA Nimco Maxamed Nuur, Daljir Gaalkacyo (daawo)